हेलमेट नेपाल : सुरक्षा सामग्रीको भरपर्दो प्लेटफर्म | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर हेलमेट नेपाल : सुरक्षा सामग्रीको भरपर्दो प्लेटफर्म
हेलमेट नेपाल : सुरक्षा सामग्रीको भरपर्दो प्लेटफर्म
काठमाडौं । काठमाडौं टेकुस्थित हेलमेट नेपालको प्रमुख कार्यालयको ढोकैमा एउटा मानिसको चित्र राखिएको छ । चित्रमा शरीरलाई बीच खप्परबाट टाङमुनिसम्म चिरेर दुई टुक्रा पारिएको छ । एकापट्टि सेतो कपडाले शिरदेखि खुट्टासम्म पट्टी बाँधिएको छ, त्यो भाग क्षतविक्षत देखिन्छ । अर्कोपट्टिको आधा शरीरमा हेलमेट, ज्याकेट, बुट लगायत राइडिङ गेयर्स (सुरक्षा सामग्री) पहिरिएको देखाइएको छ र त्यो भाग सुरक्षित छ । चित्रले सवारीसाधन चलाउँदा सुरक्षा सामग्रीको महŒव देखाउँछ । कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत सजल जोशी त्यो चित्रले सानो गल्तीले हुन सक्ने ठूलो दुर्घटनालाई देखाउन खोजेको बताउँछन् ।
हेलमेट नेपाल स्टार्टअप कम्पनी हो, जसले दुईपांग्रे सवारीका चालकलाई आवश्यक हेलमेट, पन्जा, चश्मा, बुट, ज्याकेट लगायत सुरक्षा सामग्री विक्री गर्छ । कम्पनीले आईएसआई मापदण्ड प्राप्त सामग्री मात्र बेच्ने प्रबन्ध निर्देशक प्रार्थना साख बताउँछिन् । ‘हामी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डका सामान बेच्छौं र विक्रीपछि ग्राहकलाई फोन गरेर फिडब्याक पनि लिने गरेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘समस्या आए कम्पनीले फ्री सर्भिस दिन्छ ।’ हेलमेट नेपाल बिग्रिएको हेलमेट बनाउने नेपालको एक मात्र कम्पनी भएको उनको दाबी छ । वारेन्टी र ग्यारेन्टी सहित किस्ताबन्दीमा पनि सामान विक्री गर्ने गरिएको उनले बताइन् ।
जोशी र साखले २०७३ वैशाखमा रू. ५० हजार लगानीमा शुरू गरेको कम्पनीले हालसम्म २० हजार ग्राहकलाई सेवा दिइसकेको छ । ‘सवारी साधन बढे पनि उल्लेख्य मात्रामा राइडिङ गेयर्सको विकास भइसकेको थिएन, गुणस्तरीय उत्पादन खोज्न ग्राहकलाई मुश्किल थियो,’ जोशी शुरूका दिन सम्झिन्छन्, ‘हामीले देशभर डेलिभरी सेवा दिन यो व्यवसाय शुरू गरेका थियौं र हामी सफल भयौं । हाल नेपालभरि हाम्रा ग्राहक छन् ।’
विशेषतः हेलमेटका लागि प्रसिद्ध यो कम्पनीमा हाफ, फुल, मोडुलर, डर्ट, डोल स्पोर्ट र किड्स हेलमेट पाइन्छन् ।
कम्पनीले १५० देखि १ हजार सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा लाग्ने टायर लगायत अन्य पार्ट्स पनि विक्री गर्छ । मार्केटिङ अफिसर अनमोल शाहीका अनुसार कम्पनीले रू. १ लाखदेखि ५ लाखसम्मको सामान किन्नेलाई दुर्घटना बीमा पनि गर्दै आएको छ । हाल चाबहिल, माइतीघर र टेकुमा यसका शोरूम छन् ।
सिनियर एचआर अफिसर अरुणकुमार पोखरेलका अनुसार कम्पनीले सबै प्रकारका हेलमेट र सुरक्षा सामग्रीको अनलाइन कारोबार पनि गर्छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम र वेबसाइटमा गरेको अर्डर अनुसार यसले काठमाडौंमा फ्री डेलिभरी र काठमाडौं बाहिर चार्जसहित डेलिभरी गरिरहेको छ । हेलमेट नेपालले सडक सुरक्षाको विषयमा ‘प्रयास क्याम्पेन’ अभियान पनि चलाइरहेको कार्यकारी अधिकृत साखले बताइन् ।
सडक सुरक्षा र दुर्घटनाका विषयमा आफूहरूले विभिन्न कलेजमा गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । आगामी दिनमा चालक सुरक्षा सामग्रीको क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्लेटफर्म बन्ने भिजन राखेको यस कम्पनीमा हाल २७ जना कर्मचारी छन् ।